In ka badan 140–muhaajirin ah oo ku dhintay doon la qalibantay | SMC
Home WARARKA MAANTA In ka badan 140–muhaajirin ah oo ku dhintay doon la qalibantay
In ka badan 140–muhaajirin ah oo ku dhintay doon la qalibantay
Ugu yaraan 140 muhaajiriin ah oo ku sii jeeday Yurub ayaa ku dhintay xeebta Senegal,ka dib markii Dooni ay la socdeen oo sidday laba boqol oo ruux uu dab qabsaday,isla markaana qallibantay,sida maalinimadii Khamiiista ee shalay laga soo xigtay Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka IOM .
Dowladda Senegal iyo Ururka IOM ayaa gaaray magaalada Saint-Louis,kuwaas oo gargaar degdeg ah u fidiyay,isla markaana qiimeeyay baahiyaha dadkii ka badbaaday Doontaasi .
Tirada dadka ka ambabaxaya Galbeedka Afrika ee tagaya jasiiradaha Canary,ayaa kordhay ,iyadoo shilkaan uu noqonayo kii ugu waxyeelada badnaa ee la diiwaan geliyo sannadkaan, sida ay sheegtay IOM.
Qiyaastii illaa 414 qof ayaa la ogyahay inay sannadka ku dhinteen xeebaha kulaala Dalka Senegaal.
Previous articleCiidamada Dowladda & kuwa Galmudug oo baadi-goobaya maleeshiyaad dil geystay
Next articleMaxay kawada hadleen Ra’iisal wasaare Rooble iyo Safiirka Dalka Turkiga?